I2 Ihlobo 2017 | Isiseko soMvuzo - Uthando, ubulili kunye ne-Intanethi
Ikhaya I2 Summer 2017
Ndiyathemba ukuba uyonwabele ihlobo. Abasebenzi be-TRF bebexakekile belungiselela ixesha elitsha elizayo kunye nezifundo zesikolo eziqala nge-1 kaSeptemba, iintetho ze-GPs kunye noomasifundisane. Besihleli sibhala amaphepha, sifaka isicelo senkxaso mali kwaye sihlangana nabantu abaninzi kurhulumente, oogunyaziwe bengingqi, kwizibonelelo kunye nakumajelo osasazo abanokwazi ukunceda ukuhambisa umsebenzi wethu phambili. Siza kukugcina unolwazi njengoko abo nxulumana nabo bekhula.
Yonke ingxelo iyamkeleka kuMary Sharpe mary@rewardfoundation.org.
Ukuthintela ukuziphatha okubi ngokwesondo
Uphando: Ukujoliswa kwezeMpilo
IsiKhwama sembuyekezo kwizikolo
Siphulaphule sithetha e-Edinburgh
Inkomfa yentsapho eCroatia
I-strapline entsha ye-Foundation Reward
Ukukhuselwa kakubi kwabantwana baseJamani nase-UK
Ngomhla wama-28 kaJulayi i-TRF yaya kumsitho wosuku olunye woqeqesho ngu-NOTA (Umbutho weSizwe woNyango lwa-Abusers Scotland) kunye nezithethi ezi-2 ezigqwesileyo. Okokuqala yayinguNjingalwazi Klaus Beier (ofotyiweyo), ingcali ekhokelayo kwilizwe jikelele yokuthintela ukuxhatshazwa kwabantwana ngokwesondo kunye nomyili we IProkelfeld Prevention Project eJamani. Owesibini nguNjingalwazi uMieran McCartan, i-criminologist kwiYunivesithi yaseBristol oye waphonononga iimpendulo zangoku kunye neziphumo ezinokuthi zisebenze kunye nabakhubazwayo ngokwesondo kwi-UK ngokubhekiselele kwizifundo ezivela kwiprojekthi yaseDunkelfeld. Funda ibali lethu Apha.
U-Mary Sharpe, iGosa lethu eliyiNtloko lesiGqeba wayengumbhali-mbhali 'wengcinga' kuthintelo lokuziphatha okubi ngokwesondo kwabafikisayo. QAPHELA, Umbutho weSizwe woNyango lwaBaphethwe gadalala. I-NOTA sisisa esibonelela ngenkxaso kwiingcali ezijongana nabaphuli-mthetho ngokwesondo. Kolu hlalutyo lophando lwamva nje, uMary ujoyine iqela lase-UK elikhokelwe nguStuart Allardyce, uMphathi weSizwe we-Stop It Now! EScotland. Ungabona ibali kule Apha.
Into endiyikhethile kule ncwadana iyabizwa Impembelelo ye-Intanethi ye-Intanethi yabantwana. Kwabhalwa yi-American College of Pediatricians njengengxelo yomgaqo-nkqubo kunye nemihla ukusukela ngoJuni 2016.
KWEMISEBENZI: Ukufumaneka kunye nokusetyenziswa koononografi kuye kwaba phantse kuyo yonke indawo kubantu abadala nakwishumi elivisayo. Ukusetyenziswa koonografi kunxulunyaniswa neziphumo ezibi zeemvakalelo, ezengqondo kunye nezempilo. Oku kubandakanya ukonyuka kwamazinga oxinzelelo, uxinzelelo, ukwenza izinto kunye nokuziphatha okunobundlobongela, ubudala obuncinci besini, ubuhenyu, ukwanda komngcipheko wokukhulelwa kolutsha, kunye nembono egqwethekileyo yobudlelwane phakathi kwamadoda nabasetyhini. Kubantu abadala, iphonografi ikhokelela kumathuba awandayo oqhawulo mtshato oluyingozi nakwabantwana. Ikholeji yaseMelika yoGqirha wabantwana ibongoza iingcali kwezempilo ukuba zinxibelelane ngomngcipheko wokusetyenziswa kwephonografi kwizigulana nakwiintsapho zazo kunye nokubonelela ngezixhobo zombini ukukhusela abantwana ekubukeni iphonografi kunye nokunyanga abantu abaneziphumo ezibi.
Ndingathanda ukuncoma incwadi kubazali, ootitshala nabaqeqeshi. Indoda, yaphazanyiswa- Kutheni amaTyendyana aSokola kwaye sinokwenza ntoni ngayo Ngu-Stanford Psychology uNjingalwazi uPhilip Zimbardo noNikita Coulombe. Yakha kwintetho yeTED kaNjingalwazi uZimbardo Ukuditywa kweeGay ngubani owayengumlingane othetha nentsebenziswano yethu uGary Wilson ethandwa nguTEDx I-Big Porn.
Isiseko sencwadi kukuba sijongene nehlabathi elitsha elinobukroti; ihlabathi apho abaselula bafumana khona. Ababhali bathi umlutha kwimidlalo yevidiyo kunye noonobumba be-intanethi uye wadala isizukulwana esinamahloni, esichengeni, esithintekile ngokwasemzimbeni, kunye nabaselula abangenayo ingxaki (kwaye bengathandi) ukuhamba ngokubakho ubunzima kunye nobungozi obubangelwa ubuhlobo bokwenene bokwenene , isikolo kunye nomsebenzi. Ukuqwalasela ngokubalulekileyo ingxaki echithayo kwiintsapho nakwiindawo zonke, Indoda, yaphazamiseka Ucebisa ukuba abafana bethu babhekene nentsholongwane entsha. Ukwazisa isicwangciso esitsha esinesibindi sokuzibuyisela kumzila.
Iziqendu ezigqityiweyo zinika isisombululo sezinto ezinokuchaphazeleka ngamacandelo ahlukeneyo oluntu kuquka izikolo, abazali kunye namadoda amancinane. Ezaliswe ukuxelela iingcamango, iziphumo zophando oluthakazelisayo, uhlalutyo lokuqonda, kunye neziphakamiso eziphathekayo zokutshintsha, umntu, ukuphazamiseka yincwadi yexesha lethu. Incwadi ekwazisa, imingeni, kwaye ekugqibeleni iyashukumisela.
Kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo siye sathethana nabanye iingcali ezine.
NgoJuni saxoxwa noKenneth Cloggie, wase-Edinburgh lomthetho wecala kuchaza inkqubo apho umzali nomntwana abanokujamelana nayo xa bebekwe ityala lezesondo. Ubone ukunyuka kwezenzo ezinxulumene nentengiso ye-intanethi. Udliwano-ndlebe lwakhe luya kubonakala kwiwebhusayithi ngexesha elifanelekileyo.
Ngethuba ndandwendwela iAustralia ngoJulayi senza i-45 ndlebe ndlebe kunye noLiz Walker, okhokelayo ngesini sootitshala. U-Liz waqala ukubonakaliswa kwimizila engamanyala engcolileyo kwibhasi yesikolo eneminyaka eyi-6 ubudala. Wakhe ibali yenza u kufunda kakuhle. Ngoku usebenza kunye nomkhankaso olwachasayo noProfesa uGail Dines Inkcubeko igxothwe.
UDkt Paula Banca (echazwe ngezantsi), a umphandi we-neuroscience evela kwiYunivesithi yaseCambridge yanikeza ubungqina obuncedo kwiphepha lokuphanda alipapashe ngalo Ukwazisa, ukulungiswa kwemeko kunye nokukhathalela ingqalelo kwimivuzo yesondo. Olu phando lubalaseleyo lwamkelwa xa liphumelele imbasa yoPhando ka-2016 kuMbutho woPhuculo lweMpilo yezeSondo.
Buyela eScotland, senza intetho-ndlebe kunye no-Anne Chilton, intloko yoLwazi lweZakhono zoLuleko ngezoBudlelwane baseScotland ukufunda ngeenkqubo zokuqeqeshwa kwezobugcisa zesini eScotland. Uthe kwakukho iingcali ze-30 eziqeqeshwe ukujongana nezibini kunye nokunyuka kweengxaki zezempilo zesini zesondo. Wayeyixhalabisa ukuba uncedo oluncinci lwezemali luvela kuRhulumente waseScotland kule nkinga ekhulayo.
I-TRF iya kuhambisa iiklasi kubafundi e-Edinburgh Academy, kwizikolo zikaGeorge Watson naseSt Columba's Kilmacolm kwimpembelelo ye-intanethi kwimpilo, ubudlelwane, ulwaphulo-mthetho kunye nobudlelwane obuqala nge-1 Septemba. Siza kuthetha kwakhona abazali nabafundi KwiNtlanganiso yeGeorge Watson yeMibono ngoSeptemba kunye abazali lwa bafundi e-Tonbridge School, eNgilani ngo-Oktobha.
Ngomhla we-13 ku-Okthobha senza intetho ku I-Medico-Chirurgical Society yase-Edinburghmalunga nefuthe le-intanethi ye-intanethi kwimpilo yeselula. Lo Mbutho uphakamise imicimbi yonyango ukususela kwi-1821.
Yiza usijoyine nge-16 kaNovemba kwiNdawo eNgcwele yeAugustine United Church, 41 eGeorge IV Bridge, e-Edinburgh, e-EH1 1EL xa i-CEO yethu uMary Sharpe eyakuba sisithethi esiphambili njengenxalenye I-International Edinburgh Centre for Spiritual and Peace intsebenziswano. Uya kuthetha "Ngokomoya, Uvelwano kunye noTywala". Oku kuya kulandelwa yingxoxo yephaneli kunye nezinye iingcali kubandakanya umzali nosekela-titshala oyintloko u-Audrey Fairgrieve, kunye notata kunye nomkhankaso wezempilo, uDouglas Guest. Izithethi ziya kwaziswa nguDarryl Mead, uSihlalo weSiseko soMvuzo.
Siza kuhambisa i-workshop kwiinkalo zabaqeqeshi bezempilo, ootitshala kunye namagqwetha kwinkomfa yonyaka UMbutho woPhuhliso lwezeNtlalo e-Salt Lake City ngo-5-7 Oktobha. Isihloko kulo nyaka Impilo Yecanshe kwiZiko leDarikhi.
Nge-21st ka-Okthobha siza kube sithetha ngonyaka inkomfa yentsapho eZagreb, eCroatia Isihloko esithi "Usapho, iZikolo: Isitshixo senkululeko kwiZiyobisi". Igalelo lethu liza kuqala ngentetho emiselweyo kusasa kwaye siya kukhokela iworkshop kamva emini.
Sitshintshile kutshanje "kwiingqondo zethu kunye nolwabelana ngesondo" emva koMvuzo weReward, "ukuthandana, ngokwesondo kunye ne-intanethi". Ingcamango kukuguqula ugxininiso kwi-intanethi ngaphandle kokukhankanya igama elithi "i-porn". Sisajolise ekufundiseni malunga nenkqubo yomvuzo wengqondo. Abanye abantu bafumene ukuba igama elithi "ingqondo" liyekile ukubeka, ukukholelwa ulwazi olusele lukhona lwamachiza okanye i-neuroscience kwafuneka ukuba sifunde izinto zethu. Oku akunjalo.